Hlukanisa i-2GB enkulu OST Fayela kumafayili amancane we-PST - Umhlahlandlela Wezinyathelo Ngezinyathelo
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Exchange Recovery Hlukanisa i-2GB enkulu OST Fayela kumafayela amancane we-PST
Ukusebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuze Split Oversized 2GB OST Fayela kumafayela amancane we-PST
Qaphela: Uma une-Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme ezifakiwe, sincoma ukuthi usebenzise le ndlela ukuthola ubukhulu bakho obukhulu OST file esikhundleni salokho. Ngaphandle kwalokho, sicela usebenzise indlela ekule mhlahlandlela.
Uma wakho OST ifayela lenziwe yiMicrosoft Outlook 2002 noma izinhlobo eziphansi, futhi ubukhulu bayo bufinyelela noma budlule u-2GB, uzohlangana nefayela le- Ngaphezulu OST inkinga yefayela futhi ayikwazi ukusebenzisa i- OST fayela okunye. Esimweni esinjalo, ungasebenzisa DataNumen Exchange Recovery ukuhlukanisa okungaphezulu OST fayela kumafayili amancane we-PST angaphansi kuka-2GB futhi ahambisana ne-Outlook 2002 nezinguqulo eziphansi. Ngemuva kwalokho ungasebenzisa i-Outlook 2002 noma izinhlobo eziphansi ukuvula amafayela e-PST ahlukanisiwe ngamunye ngamunye futhi ufinyelele idatha yabo ngaphandle kwezinkinga.
Qaphela: Ngaphambi kokuhlukanisa okungaphezulu OST ifayela nge DataNumen Exchange Recovery, sicela uvale iMicrosoft Outlook kanye nolunye uhlelo lokusebenza olungangena noma luguqule ifayela le- OST Ifayela.
bese usetha umkhawulo wosayizi kunani elingaphansi kuka-2GB. Kunconywa ukuthi usebenzise inani eliyingxenyenamba engu-2GB kuphela ukuze ifayela lakho le-PST lingakwazi ukufinyelela ku-2GB futhi maduzane, ngokwesibonelo, i-1000MB. Sicela wazi ukuthi iyunithi iyi-MB.
Khetha okungaphezulu OST ifayela elizokwehlukaniswa:
Ungafaka okungaphezulu OST igama lefayela ngqo noma chofoza ukuphequlula bese ukhetha i- OST ifayela. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola inkinobho enkulu OST ifayela okufanele lihlukaniswe kukhompyutha yendawo.
Ngokuzenzakalelayo, nini DataNumen Exchange Recovery iskena futhi ihlukanise umthombo ngokweqile OST Ifayela libe ngamafayela amancane we-PST, ifayili lokuqala elihlukanisiwe le-PST libizwa nge-xxxx_fixed.pst, elesibili yi-xxxx_fixed_1.pst, elesithathu yi-xxxx_fixed_2.pst, njalonjalo, lapho i-xxxx igama lomthombo osetshenzisiwe OST ifayela. Isibonelo, ngomthombo osayizi omkhulu OST Umthombo wefayela.ost, ngokuzenzakalela, ifayili lokuqala elihlukanisiwe le-PST lizoba yiSource_fixed.pst, kuthi elesibili kuzoba yiSource_fixed_1.pst, bese kuthi eyesithathu kube yiSource_fixed_2.pst, njll.
Njengoba sine-Outlook 2002 noma izinhlobo eziphansi kuphela ezifakiwe, kufanele sisethe ifomethi yefayela le-PST elikhiphayo ku- “Outlook 97-2002” ku-combo eceleni kwebhokisi lokuhlela ifayela. Uma usetha ifomethi ku- "Auto Determined", lapho-ke DataNumen Exchange Recovery izokhiqiza ifayela le-PST elihambisanayo ne-Outlook efakwe kukhompyutha yasendaweni.
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Exchange Recovery intando starukuskena umthombo kukhulu ngokweqile OST ifayela, ululama futhi uqoqe imininingwane ekulo, bese uwafaka efayeleni le-PST elisha elihlukanisiwe eligama lalo lisethwe ku-Isinyathelo 5. Sizosebenzisa iSource_fixed.pst njengesibonelo.
Lapho usayizi weSource_fixed.pst ufinyelela kusethi esinqunyelwe ku-Isinyathelo 2, DataNumen Exchange Recovery izokwakha ifayela elisha lesibili le-PST elibizwa ngokuthi i-Source_fixed_1.pst, bese izama ukufaka idatha esele kulelo fayela.
Lapho ifayili lesibili lifinyelela umkhawulo osethiwe futhi, DataNumen Exchange Recovery izokwakha ifayela elisha lesithathu le-PST elibizwa ngokuthi i-Source_fixed_2.pst ukwamukela idatha esele, njalonjalo.
Ngemuva kwenqubo yokuhlukanisa, uma ngabe kukhona idatha ethuthelwe kumafayili e-PST ahlukanisiwe ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo elifana naleli:
Manje usungavula amafayela e-PST ahlukanisiwe ngamunye ngamunye nge-Microsoft Outlook 2002 noma izinhlobo eziphansi. Futhi uzothola yonke imininingwane ye-original oversized OST ifayela lisakazeka phakathi kwalawa mafayili e-PST ahlukanisiwe.
Qaphela: Uhlobo lwedemo luzobonisa ibhokisi lomlayezo elilandelayo ukukhombisa impumelelo yenqubo yokuhlukanisa:
Ngemuva kwalokho ungavula amafayela e-PST ahlukanisiwe nge-Microsoft Outlook 2002 noma izinhlobo eziphansi. Kodwa-ke, kumyalezo ngamunye nokunamathiselwe kumafayili e-PST ahlukanisiwe, okuqukethwe kwabo kuzothathelwa indawo imininingwane elandelayo yedemo:
Ukuthola okuqukethwe uqobo, sicela oda okufushane umnyuziki.
Hlukanisa i-2GB enkulu OST Fayela kumafayela amancane we-PST